အေးဗျာ ခင်ဗျားပြောသလို ပါပဲ ချလမ်ပဲ ဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ် ဗျာ
မပေးသင့်ဘဲ လက်ဆော့လို့ အနီကဒ်ပြထားရင်
မန်းတာလည်းနီလေက်တယ်။ ကို X MEN ပြောတာမှန်တယ်လို.ထင်တယ်။သူပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။
သူလည်း Admin တစ်ယောက်ပဲ.. http://www.eainlwanthu.comက ကို X MAN ကြီးစိတ်ဆိုးရဝူးနော်….
အမှန်ပြောတာကို…… :-) :-)
ကျေးဇူးကြီးပါပေရဲ့ ကက်ပတိန် ရယ်။ သူပြောမှသိရတယ်။
ရွာသားများခင်ဗျား …။ နောင်မကြာမီရက်အတွင်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် နာမည်သစ်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ပါမယ်။
အကျွေးအမွေးကတော့ အခုတလော ရွာထဲမှာလာလာတင် ထားတာတွေကိုက အလွန့်အလွန်များနေလို့ အဲဒါတွေအရင်သုံးဆောင်ကြပါလို့ …။ (ပစ်လိုက်ရရင်နှမြောစရာကြီးနော)
တစ်နေ့ ၁ဝ တော့ ဝင်ယူမှာပဲ …
ကိုကြောင်ကြီးက သတင်းကို ကပ်စီးနည်းလွန်းတယ်
ကန်မြင်.ရင်ကြာတင်.ဆိ်ုကလို သူကြီးအမတ်ဖြစ်ရင် ဒီရွာကြီး လဲဂုန်တင်.မှာမို.ကိုကြီးကြောင်ရေ
အလို…သူကြီးက အီရတ်ပြန်ဆိုပါလား။ ဘယ်တုန်းက ဘာကိစ္စနဲ့ သွားလိုက်တာပါလိမ့်…??
နီတဲ့ စိမ်းတဲ့ လူတွေ နီတဲ့အခါ စိမ်းတဲ့အခါ နာမည်နဲ့ တကွ ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်
သူတို့ လုပ်ကြပါ့မလား။ ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပုန်း ပြသလိုမျိုးလား သတ္တိမရှိတဲ့
သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်မို့လို့ ရှုံ့ချ ပါတယ်။
မကြေနပ်က အများကြီး နီပေး နိုင်တယ် …ဟားဟား မကြောက်သေးဘူး..
king နဲ့ usnczn ကို အနီကတ်ပြပါတယ်။ ပြောထားရဲ့သားနဲ့ ကျုပ်ခြံထဲဝင် သေးပေါက်လို့ပါ။ နောက်တခါဆို ဖြတ်ပစ်မယ်။ :angry:
အရှင် ရုက္ခစိုးမင်း(ကိုကြောင်းကြီး) ခင်ဗျားး…
ကျွန်တော့် မသိပဲ အရှင်ရဲ့ ခြံဝင်းထဲမှာ ရှူရှူးဝင်ပေါက်မိတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်တော့်ကို ဗွေမယူပါနဲ့ (မြန်မာဇာတ်လမ်းများတွင်ပါသော ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်မှ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ကော်ပီယူခဲ့ပါသည်) ….
အနီကတ် ကို အယူခံ ဝင်ပါတယ် … သုံးပွဲတော့ အပယ်မခံနိုင်ပါဘူး
ပွဲကြပ်တွေ ကန်ဖို့ ရှိသေးလို့ …..
သူကြီးခင်ဗျား …. ကိုယ့်အကြောင်းကိုစောစောစီးစီး ဝန်ခံလိုက်ရင်ကောင်းမည်ထင်ပါသည်။
အကောင်ကြို ပြောသလို သူကြီး က အီရတ်ပြန် ဆိုရင်တော့ အမေရိကန် မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်တာ ၁၅နှစ် ၁၆နှစ် လောက် ရှိပြီ လို့မှန်းဆကြည့်မယ်ဗျာ ။
ဦးဖက် ပြောသလိုပဲ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းတာက သက်သာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် ပဒုမ္မာleak ပြောသလိုများ ဖြစ်နေပြီလားမသိ။
” တဦးချင်းပြန်စစ်လိုက်ရင် ၃၆ဦးပဲ တကယ်ရှိတယ်။
လေးဆယ်မကျော်ဘဲနဲ့ အကုန်ဘယ်ပြောလို့ေ ကာင်းမလဲ ”
I also want to know about our “Thu Gyee”
May be, I am 37th.
နဲနဲတော့လျှော့လိုက်ပါ ကိုကြောင်ကြီးရယ် … နော်။ 37 နဲပဲ ထားလိုက်ပါ။
ဉီးကြောင်ကြီး ဝဋ်လိုက်မယ်နော် သိချင်ပါတယ်ဆိုမှ အနော်တို့ကို ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတယ် …
မပြောသေးဘူးဆိုကာမှ …. ပိုသိချင်လာပြီ …။
koyewin80 တဲ့ ၈ဝ ရှိပြီ။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောလို့ရပြီပေ့ါ နော်။
ရွာထဲမှာ တကယ် ဝင်ရေးနေတာ လူ ၄ဝ တောင် ပြည့်မယ် မထင်တော့ဘူး။
သဂျီးကတော့ မန်ဘာ ဦးရေ ၄၀၀ဝ ရှိတယ် လစဉ် ကြည့်တဲ့ လူ သိန်းချီ ရှိတယ် ပြောနေတာ.. ဟီးဟီး..
တညိုးတော့ တညိုးပါလားနော်.. :indifferent:
ကြွက်ကလေးတွေကို ဖမ်းပြီး ကြောင်ကြီးက ကစားနေသလိုမျိုး လှည့်စားနေတာ
တော်ပြီ .. မသိချင်တော့ဘူး ..
ဘင်လာဒင်ဖမ်းတုန်းက ပါတဲ့ကြောင်က ဦးကြောင်ကြီးတပည့်လားဟင် ?
အခုမှပဲ အီရန်နဲ့ အီရတ်စစ်ပွဲအကြောင်း သိရတော့တယ်။
၅ဝ ပြည့်ရန် သိပ်မလိုတော့ဘူး ဆိုပါလား.. ဒီလရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး ပိုစ်တောင် ဖြစ်သွားမလားပဲ..
ကိုကြောင်ကြီးနဲ့သဂျီးက ခေါင်းပေါင်းအဖြူကြီးနဲ့ မုတ်ဆိတ်တွေနဲ့လား
အီရမ်ပြန်၊ အီရပ်ပြန်တွေ ဆိုတော့…..
ဦးကြောင်ကြီး မြန်မြန်ပြောအောင် မန့်လိုက်ပြီ
ဦးကြောင်ကြီးက အီရန်ကိုဘာပြုလို့ သွားခဲ့တာလဲ
(မျှော်တော်ယောင်)၂ ၊ မျှော်တော်ယောင် ဘဝကကျွတ်ချင်ပြီ ၊ (သူမဖော်ရင်)၂ မျှော်တော်ယောင်ဘဝက ကျွတ်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူး။
congratulation ပါ bigcat ရေ။ popular အူဝဲ၊ တင့်တင့်ထွန်း နဲ့ ဝိုင်းစု စကပ်နား ကပ်လိုက်နိုင်တာ bigcat တယောက်ပဲရှိတယ် တိုက်တေနီယမ် တိုက်ကွမ်ဒို မန်ဘာကြီးရေ။
အားဂျား အားဂျား.. ကြောင်ကြီး.. ကွန်မန်း အရေ အတွက် အများကြီး ရစေဖို့ အားသစ်လောင်း ထပ်မန်းလိုက်တယ်။ ပွိုင့် စနစ် ပြောင်းသွားတော့ ဒီမှာ လာမန်းတဲ့ လူတွေ တခါမန်းပြီးရင် ပွိုင့်မရတော့ပါဘူး။ မန်းရင် ပွိုင့်ရတဲ့ သူက ပိုစ်တင်သူပါ။ ပွိုင့် မရပေမဲ့ အနစ်နာ ခံပြီး တင့်တင့်ထွန်း နဲ့ ဝိုင်းစု ကို ကျော်ဖို့ မန်းလိုက်လေ သတည်းးးးးးးးးးး။
နောင်တချိန် သဂျီး ပြောသလို ကွန်မန်း အများဆုံး ရတဲ့ ပိုစ်တွေ ကြည့်တဲ့ လူ ရှိရင် သဂျောင်းအကြီး သဂျီးအကြောင်း လူသစ်တွေ သိသွားတာပေါ့.. ဟဲဟဲ..
သူကြီးက ကောမန့်တွေကို ကြည့်ပြီး “ငါကွ သူကြီး”ဆိုပြီး မိန့်မိန့်ကြီးပဲပြုံးနေမလားဘဲ။
သူကြီးသတင်းစုံစမ်းရတာ ဘင်လာဒင်သတင်း စုံစမ်းရတာထက်တောင် ခက်သေးတယ်..ဟူး….။ မရရင်တော့ ကြောင်ကြီးသတင်း သူကြီးဆီကပြန်စုံစမ်းရမယ်။
ကိုကြောင်ကြီးက ကွန်မန်း ၁၀ဝ ရရင် ပွိုင့် ၅၀ဝ ရမှာဆိုတော့ မမန်းမန်းအောင် လုပ်နေတာ …
ပွိုင့်မရပေမယ့် ကိုကြောင်ကြီး ပွိုင့်တိုးစေရန်အလို့ငှာ တစ်ခါ ထပ်မန်းပေးလိုက်ပါတယ် ….
တဖြေးဖြေးနဲ့ သူကြီးအကြောင်းထက် ကိုကြောင်ကြီးအကြာင်းတောင် ပိုသိကုန်တော့မယ်။
ဘယ်၍ ဘယ်မျှ အချိန်ရွှေ့နေပြီးတော့….။
တခါဖတ်ဖူးတယ် ဟုတ်မဟုတ်တော့ သိပ်မသေချာဘူး။ သဂျီးက ကားပြိုင်ပွဲ ဝင်ဘူးတယ်ဆိုလား။
အမှန်အကန် hmeeleak ကိုပဲ ယုံကြည်လိုက်တော့မယ်။
ကွန်မန်းတွေ ဖတ်ပြီး သဂျီးက တော့ တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်ပြီး ပြုံးနေမှာသေချာတယ်။
ငါအကြောင်းကို တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတာဘဲ ဆိုပြီး…..
နောက် ရွေးကောက်ပွဲတောင် ဝင်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်နေလောက်ပြီ။
သဂျီး ရွေးကောက်ပွဲဝင် ရင် သဂျီးကို ဘဲ မဲပေးမယ်။
ရွှေမင်းသားရေ-လူကိုခင်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်မင်တာလား။ ပုဂ္ဂိုလ် ခင်လို့ လူကို မင်တာလား။ ကိုယ့်ရွာသဂျီးပဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တော့ မဲမပေးနိုင်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ခင် ပြောတာတွေ နားထောင်ကြည့်ရဦးမယ်။
ရွေးကောက်ပွဲက ဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်။ မဲပေးရင်လဲ ဘေးက အကာပါတယ်လေ ကြိုက်တာ အမှန်ခြစ်လို့ရတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်က လွဲပြီး ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ ကိုယ်ဘယ်သူကိုမဲပေးပေး ပြသနာ မရှိ။ လောလော အချိန်မှာတော့ သဂျီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်ဆိုရင် သဂျီးကို ဘဲ မဲပေးမှာ…..
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော သဂျီးကို ဘဲ မဲပေးမှာ……( ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ထိ စိတ်မပြောင်းသွားရင်ပေါ့)
သဂျီး မှာလဲ ကောင်းတာတွေ ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ရွာသူရွာသားပေါ်မှာ သဂျီးလောက်သဘောကောင်းတဲ့သူရှိမယ်မထင်။
တော်ကြာ ကန့်ကွက်တယ် ထအော်လိုက်၊ တော်ကြာ အရူးလို့ ပြောသွားလိုက်နဲ့ သဂျီး မို့လို့ သည်းခံနိုင်တာ။ သူဘက်က ပြန်ကြည့်ရင်လဲ ဒီလို ရွာတစ်ရွာထိန်းရတာ လွယ်မယ်မထင်။
အကုန်လုံးက အစွမ်းထက်လှတဲ့ တိုက်ပင်လက်နက် ကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့…. ထိန်းရတော့ တော်တော်ခက်မှာဗျ။ ဒီကြားထဲ မထင်ရင် မထင်သလို ပိုစ့်နဲ့တစ်မျိုး ၊ ကွန်မန်းနဲ့တစ်မျိုး တိုက်ပင်အစွမ်းက ပြကြသေးတယ်။
ကျနော်တို့ သဂျီးက လူကြီးပီသပါတယ်ဗျာ။
ကဲ မသိမသာ တမျိုး၊ သိသိသာသာ တမျိုး ဖားထားတယ်နော်။